Dagaal saf balaaran ah oo ka socda duleedka Muqdisho. – Radio Daljir
Dagaal saf balaaran ah oo ka socda duleedka Muqdisho.
Mogadishu, Mar 30 -Ciidamada dowladda faderaalka ee Soomaaliya oo garab mileteri ka helaya ciidamada nabad ilaalinta Midowga Afrika ee ku sugan magaalada Muqdisho ?AMISOM? ayaa saaka si wadajir ah u qaaday howlgal ka dhan ah ururka Al-Shabaab oo ay ka fulinayaan degmada Dayniile ee gobolka Banaadir.
Degmada Dayniile oo ay qayb ka mid ah ay fariisimo ku leeyihiin ururka Al-Shabaab ayaa waxaa saaka dhowr jiho ka weeraray ciidamada dowladda iyo AMISOM, hubka waawayn iyo kuwa culus ayaa laga maqalayaa qaybo ka mid ah degmada Dayniile.
Warar horudhac ah oo laga helay dowladda ayaa sheegaya, ciidamada dowlada iyo AMISOM inay qabsadeen garoonka diyaaradaha iyo isbitaalka guud ee degmada Dayniile oo ay horay ugu sugnaayeen ururka Al-Shabaab, mana jirto wax war ah oo dhinaca Al-Shabaab kasoo baxay oo weerarka fariisimahooda lagu qaaday ku wajahan.
Dhinaca kale, waxaa xiran wadooyinka xiriirya magaalada Muqdisho ee gobolka Banaadir iyo degmada Afgooye ee gobolka Shabeelada Hoose, kadib markii ay ciidamada dowladda qayb ka mid ah la sheegay inay u jihaysteen dhinaca wadada isku xirta labada gobol.
Dowladda faderaalka iyo ciidamada AMISOM ayaa marar badan sheegay inay wajahayaan howlgallo ay gobolada kale ee dalka oo ay maamulaan ururka Al-Shabaab ku gaarayaan.